Ch 25 Matthew – 2trondro
Home / Baiboly / Filazantsaran'i Matio / Ch 25 Matthew
25:1 "Ary ny fanjakan'ny lanitra dia ho tahaka ny virijina folo, izay, nitondra ny jirony, nivoaka hitsena ny mpampakatra sy ny ampakarina.
25:2 Fa ny dimy tamin'ireo dia adala, fa ny dimy kosa hendry.
25:3 Fa ny dimy adala, dia nitondra ny jirony, tsy maka solika fitaiza;.
25:4 Na izany aza tena, ny mahira-tsaina ireo nitondra ny menaka, in ny fitoeran, miaraka amin'ny jiro.
25:5 Koa satria naharitra ela ny mpampakatra, dia, Resin-tory izy rehetra, ka dia natory.
25:6 Fa eo afovoan'ny ny alina, fitarainana nivoaka: 'Indro, dia tonga ny mpampakatra. Mivoaha mba hitsena azy. '
25:7 Ary nitsangana ireo virjiny rehetra ireo ka samy namboatra ny fanalany.
25:8 Fa ny adala hoy ny hendry, 'Omeo ho antsika amin'ny solikareo, fa ho faty ny fanalanay maty. '
25:9 Ny hendry namaly tamin'ny hoe:, 'Fandrao Angamba ireto tsy ho ampy ho anay sy ho anareo, dia mety ho tsara ho anao ny mandeha any amin'ny mpivarotra, ary mividiana ho anareo. '
25:10 Fa raha mbola natao handeha hanavotra azy, tonga ny mpampakatra. Ary ireo izay vonona-niditra taminy ho any amin'ny fampakaram-bady, ary ny varavarana mikatona.
25:11 Na izany aza tena, any amin'ny tena farany, ny sisa virjiny ihany koa ny tonga, nanao hoe:, 'Tompo ô, Tompo, vohay izahay. '
25:12 Fa izy namaly tamin'ny hoe:, 'Amen hoy Izaho aminareo, Tsy fantatro ianao.'
25:13 Ary dia tsy maintsy ho mailo, satria tsy fantatrareo ny andro sy ny ora.
25:14 Fa izany dia tahaka ny olona mametraka avy amin'ny dia lavitra, izay niantso ny mpanompony, dia nanolotra azy ny fananany.
25:15 Ary ny anankiray nomeny talenta dimy, ary ny anankiray roa, nefa ny anankiray nomeny iray, samy araka ny fahaizany. Ary avy hatrany, dia niainga.
25:16 Dia ilay nandray talenta dimy nivoaka, Ary nanao fampiasana ireo, ary nahazo dimy hafa.
25:17 Ary toy izany koa, izy ilay nandray ny roa dia nahazo roa hafa.
25:18 Fa izy ilay nandray ny iray, mandeha mivoaka, nihady an-tany, Ary nanafina ny vola ny tompony.
25:19 Na izany aza tena, Ary nony ela,, ny tompon'ireo mpanompo ireo ka nanorim-ponenana niverina kaonty aminy.
25:20 Ary rehefa ilay nandray ny talenta dimy nanatona, dia nitondra talenta dimy hafa, nanao hoe:: 'Tompo ô, talenta dimy no natolotrao ahy. Indro, Efa nitombo izany amin'ny dimy hafa. '
25:21 Ny tompony taminy: 'Vita tsara, mpanompo tsara sady mahatoky. Koa satria efa nahatoky tamin'ny zavatra vitsivitsy, Dia hanendry ho anareo ny zavatra maro. Midira ao amin'ny fifaliana ny tomponao. '
25:22 Dia ilay nandray talenta roa koa ny nanatona, ka hoy Izy:: 'Tompo ô, talenta roa no natolotrao ahy. Indro, Efa nahazo roa hafa. '
25:23 Ny tompony taminy: 'Vita tsara, mpanompo tsara sady mahatoky. Koa satria efa nahatoky tamin'ny zavatra vitsivitsy, Dia hanendry ho anareo ny zavatra maro. Midira ao amin'ny fifaliana ny tomponao. '
25:24 Dia ilay nandray talenta iray, manatona, nanao hoe:: 'Tompo ô, Fantatro fa ianao dia olona mila voatsiary. Ianao mijinja izay tsy nafafy, ary manangona izay tsy niparitaka.
25:25 Ary noho izany, satria natahotra, Dia nivoaka nandevina ny talentanao tao anatin'ny tany. Indro, manana ny anao. '
25:26 Fa hoy ny tompony taminy ho setrin'ny: 'Ianareo mpanompo ratsy sy kamo! Efa fantatrao fa mijinja izay tsy nafafy, ary manangona eny amin'izay tsy nanahafako aho.
25:27 Noho izany, tokony ho napetraka ny vola amin'ny banky, ary avy eo, eo amin'ny fahatongavan'ny, raha kely indrindra aho, dia ho nandray ny ahy izay amin'ny liana.
25:28 Ary noho izany, hitondra ny talenta eny aminy, ka omeo ilay manana ny talenta folo.
25:29 Fa izay rehetra manana, mihoatra homena, Ary dia hanana be dia be. Fa ny amin'izay tsy manana, na dia izay toa manana, aza dia halaina ihany.
25:30 Dia nanipy izany mpanompo tsy misy ilàna azy ho any amin'ny maizina any ivelany, any no hisy ny fitomaniana sy ny fikitroha-nify. '
25:31 Fa raha ny Zanak'olona dia efa tonga eo ny fahalehibiazany, Ary ny anjely rehetra niaraka taminy, dia hipetraka eo amin'ny seza ny fahalehibiazany.
25:32 Ary ny firenena rehetra dia hangonina eo anatrehany. Ary dia nanavaka azy tamin'ny iray hafa, toy ny mpiandry ondry manavaka ny ondry amin'ny osy.
25:33 Dia peo ny ondry, tokoa, teo ankavanany, fa ny osy eo amin'ny ankaviany.
25:34 Ary ny Mpanjaka dia hilaza amin'izay izay ho eo amin'ny ankavanana: 'Avia, ianareo izay notahin'ny Raiko. Handova ny fanjakana izay voavoatra ho anareo hatrizay nanorenana izao tontolo izao.
25:35 Fa noana Aho, ary ianao nomenareo hanina; Nangetaheta aho, ary nomenao Aho hosotroiko; Nivahiny Aho, ary ianao nandray ahy amin'ny;
25:36 mitanjaka, ary ianao nanarona ahy; marary, ary ianao nitsidika ahy; Aho tany am-ponja, ary ianao dia tonga tamiko. '
25:37 Avy eo ny marina hamaly azy, nanao hoe:: 'Tompo ô, rehefa no hitanay noana, dia nanome anao; mangetaheta, ka nanome anareo misotro?
25:38 Ary rehefa nahita anao izahay olon-kafa, ary nahazo anareo amin'ny? Na tsy nanan-kitafy, ary nanaronako anao?
25:39 Ary oviana no hitanay narary, na tao an-tranomaizina, ary mitsidika anareo?'
25:40 Ary ho setrin'ny, ny Mpanjaka dia lazao aminy, 'Amen hoy Izaho aminareo, isaky ny nanao izany ho an'ny anankiray amin'ireo, ny kely indrindra rahalahiko, ianao nanao izany ho ahy. '
25:41 Avy eo izy dia milaza koa, ho an 'ireo izay ho eo ankaviany: 'Mialà amiko, ianao voaozona ireo, ho any amin'ny afo maharitra mandrakizay, izay voavoatra ho an'ny devoly sy ny anjeliny.
25:42 Fa noana Aho, ary ianao tsy mba nomenareo hanina; Nangetaheta aho, ary ianao tsy Omeo Aho hosotroiko;
25:43 Nivahiny Aho, ary tsy mandray ahy amin'ny; mitanjaka, ary ianao tsy mba nafeniko ahy; narary sy tao an-tranomaizina, ary ianao tsy mba novangianareo. '
25:44 Ary dia hamaly Azy koa, nanao hoe:: 'Tompo ô, Ary oviana no hitanay noana, na nangetaheta, na ny vahiny, na tsy nanan-kitafy, na marary, na tao an-tranomaizina, ka tsy mba nanompo ho anao?'
25:45 Dia mamaly azy ireo hoe:: 'Amen hoy Izaho aminareo, raha tsy manao izany tamin'ny anankiray amin'ireto kely indrindra ireto, fa tsy ianareo no manao izany ho ahy. '
25:46 Ary ireo dia handeha any amin'ny fampijaliana mandrakizay, nefa ny marina no hiditra any amin'ny fiainana mandrakizay. "